အရိုးကင်ဆာ ပျောက်တယ်ဆိုတဲ့ မှိုကွန်ချာ - Khitamyin
အရိုးကင်ဆာ ပျောက်တယ်ဆိုတဲ့ မှိုကွန်ချာ
January 8, 2021Ko Khit0 Comments
အရိုးကင်ဆာ ပျောက်တဲ့ မှိုကွန်ချာ
ကျနော် မှတ်ထားတာလေးကို မျှဝေတာပါ ။ လွန်ခဲ့တဲ့ ဆယ်နှစ်လောက်က FB မသုံးစွဲကြပါဘူး နတ္ခတ္တရောင်ခြည် မဂ္ဂဇင်းကို လစဉ် ထွက်တာနဲ့ ဝယ်ဖတ်ပါတယ် အဲ့ထဲမှာက အခုလို ဆေးဖက်ဝင်သော အကြောင်းရာတွေကို အကိုးကားနဲ ပါလေ့ရှိပါတယ် ။ လွယ်လွယ်ကူကူ အသုံးဝင်ပြီး အစွမ်းထက်သော အရာများကို မှတ်ထားလေ့ရှိပါတယ်
ဟင်္သာတ မြို့နယ် တောရွာဘက်က ဦးလေးတယောက်ဟာ အရိုးကင်ဆာ ဖြစ်လို့ဆေးရုံက ဖြတ်ဖို့ ရက်ချိန်းပေးလိုက်ပါတယ်တဲ့ ထိုဦးလေးဟာ ခြေထောက်တဖက်တော့ မဖြတ်တော့ဘူး ဒီအတိုင်းသာ အသေခံသွားမယ်ဟု ဆိုကာ အရိုးကွဲမတတ် ကိုက်ခဲနေသော ဝေဒနာကို ကြိတ်မှိတ်ပြီး အန်တုကာခံနေပြီ ဆေးရုံရက်ချိန်းကို မသွားတော့ပါဘူးတဲ့
ဒီလိုဖြစ်နေချိန်မှာ တိုက်ဆိုင်စွာ တောဘက်ကပဲ ဝါသနာရှင် ရွက်ပုံးသီး ဗိန္ဓောဝါရင့် ဆရာကြီးက ဒီနည်းလေးကို ပေးခဲ့ပါတယ်တဲ့
မှိုကွန်ချာ မနုမရင့်အချိန်ကို နှုတ်ပြီး မြေကြီးများ သဲများ သန့်စင်ကာ အရက်ပြန် ပုလင်းထည်ကို ထည့်စိမ်ပြီး ပရဆေးဆိုင်တွေမှာ ဝယ်လို့ရတဲ့“ဒုတ္ထာ” အမှုန့်နဲ့ရောပြီး နေတိုင်း သုတ်လိမ်းပေးနေရုံပါဘဲ ။
အဲဒီလို လိမ်းပေးနေပြီး တဖြေးဖြေး သိသာစွာ နာကျင်ကိုက်ခဲနေသော ဝေဒနာဟာ သက်သာလာပြီး ခြေထောက်ဖြတ်ရမည်ဟု ဆိုသော အရိုးကင်ဆာဟာ ဖြတ်စရာ မလိုဘဲ အကောင်းပကတိအတိုင်း ပျောက်ကင်းသွားကြောင်း နေရပ်အတိအကျ ရွာအမည် နာမည် နှင့်တကွ ရေးသားထားဒါကို ဖတ်ခဲ့ဘူးပါတယ် ။ အတိကျ နာမည် ကိုတော့ မမှတ်မိပေမယ့် စွဲနေအောင် မှတ်ထားတာကတော့ မှိုကွန်ချာ , အရက်ပြန်, ဒုတ္ထာ ဒီသုံးမျိုးကို ရောစပ်ပြီး လိမ်းပေးရင် အရိုးကင်ဆာ ကို ပျောက်သွားတယ်ဆိုတာပါပဲ . . .
အဓိကတော့ ဒုတ္ထာ အမှုန့်ပါမယ်ဟုဆိုပါသည် ။
( မှိုကွန်ချာ ဟာ စား၍ လုံးဝမရသော မှိုပါ မိုးဦးကာလမှာ နေရာဒေသ အတောများများပေါက်ပါတယ် ပုံပါအတိုင်းမှိုပါ ရင့်သွားလို ရှိရင် ပုတ်စော်အရမ်းနံပါတယ် လောက်တွယ်တဲအထိကို ပုတ်စော်နံတဲ မှိုမျိုးပါ )
အဲလို မရင့်မစွန့်ခင် အနုကို နှုတ်ပြီး အရက်ပြန်ပုလင်းနှင့် စိမ်းထားပါက နှစ်နှင့်ချီကြာနေတောင်မှ အာနိသင် မပျက်ဘူးဟု ဆိုပါသည် ။ ဒုတ္ထာ အမှုန့် မပါဘဲနဲ့အရက်ပြန်နဲ့ စိမ်းထားပြီးအရည်ကို သွေးစူနာ၊အနာစိမ်း၊ အနာပဆုတ် ယားနာ၊ ပွေးနင်းကူး စသည့် အရေပြား အနာမျိုးစုံကိုလည် ပျောက်ကင်းကြောင်း ဆိုပါသည် ။ တောနယ်ဘက်တွေမှာ ထိုကဲသို ဆေးနည်းလေးက အင်မတန် အသုံးဝင်နိုင်ပါသည် ။
ထို့ကြောင့် ကျနော် သိသလောက် မျှဝေ လိုက်ပါရစေ မိတ်ဆွေများကို
Credit@ကျိုက်ထို ရွှေမြို့တော် သတင်းစဉ်
အ႐ိုးကင္ဆာ ေပ်ာက္တဲ့ မႈိကြန္ခ်ာ
က်ေနာ္ မွတ္ထားတာေလးကို မွ်ေဝတာပါ ။ လြန္ခဲ့တဲ့ ဆယ္ႏွစ္ေလာက္က FB မသုံးစြဲၾကပါဘူး နတၡတၱေရာင္ျခည္ မဂၢဇင္းကို လစဥ္ ထြက္တာနဲ႔ ဝယ္ဖတ္ပါတယ္ အဲ့ထဲမွာက အခုလို ေဆးဖက္ဝင္ေသာ အေၾကာင္းရာေတြကို အကိုးကားနဲ ပါေလ့ရွိပါတယ္ ။ လြယ္လြယ္ကူကူ အသုံးဝင္ၿပီး အစြမ္းထက္ေသာ အရာမ်ားကို မွတ္ထားေလ့ရွိပါတယ္
ဟသၤာတ ၿမိဳ႕နယ္ ေတာ႐ြာဘက္က ဦးေလးတေယာက္ဟာ အ႐ိုးကင္ဆာ ျဖစ္လို႔ေဆး႐ုံက ျဖတ္ဖို႔ ရက္ခ်ိန္းေပးလိုက္ပါတယ္တဲ့ ထိုဦးေလးဟာ ေျခေထာက္တဖက္ေတာ့ မျဖတ္ေတာ့ဘူး ဒီအတိုင္းသာ အေသခံသြားမယ္ဟု ဆိုကာ အ႐ိုးကြဲမတတ္ ကိုက္ခဲေနေသာ ေဝဒနာကို ႀကိတ္မွိတ္ၿပီး အန္တုကာခံေနၿပီ ေဆး႐ုံရက္ခ်ိန္းကို မသြားေတာ့ပါဘူးတဲ့
ဒီလိုျဖစ္ေနခ်ိန္မွာ တိုက္ဆိုင္စြာ ေတာဘက္ကပဲ ဝါသနာရွင္ ႐ြက္ပုံးသီး ဗိေႏၶာဝါရင့္ ဆရာႀကီးက ဒီနည္းေလးကို ေပးခဲ့ပါတယ္တဲ့
မႈိကြန္ခ်ာ မႏုမရင့္အခ်ိန္ကို ႏႈတ္ၿပီး ေျမႀကီးမ်ား သဲမ်ား သန႔္စင္ကာ အရက္ျပန္ ပုလင္းထည္ကို ထည့္စိမ္ၿပီး ပရေဆးဆိုင္ေတြမွာ ဝယ္လို႔ရတဲ့“ဒုတၳာ” အမႈန႔္နဲ႔ေရာၿပီး ေနတိုင္း သုတ္လိမ္းေပးေန႐ုံပါဘဲ ။
အဲဒီလို လိမ္းေပးေနၿပီး တေျဖးေျဖး သိသာစြာ နာက်င္ကိုက္ခဲေနေသာ ေဝဒနာဟာ သက္သာလာၿပီး ေျခေထာက္ျဖတ္ရမည္ဟု ဆိုေသာ အ႐ိုးကင္ဆာဟာ ျဖတ္စရာ မလိုဘဲ အေကာင္းပကတိအတိုင္း ေပ်ာက္ကင္းသြားေၾကာင္း ေနရပ္အတိအက် ႐ြာအမည္ နာမည္ ႏွင့္တကြ ေရးသားထားဒါကို ဖတ္ခဲ့ဘူးပါတယ္ ။ အတိက် နာမည္ ကိုေတာ့ မမွတ္မိေပမယ့္ စြဲေနေအာင္ မွတ္ထားတာကေတာ့ မႈိကြန္ခ်ာ , အရက္ျပန္, ဒုတၳာ ဒီသုံးမ်ိဳးကို ေရာစပ္ၿပီး လိမ္းေပးရင္ အ႐ိုးကင္ဆာ ကို ေပ်ာက္သြားတယ္ဆိုတာပါပဲ . . .
အဓိကေတာ့ ဒုတၳာ အမႈန႔္ပါမယ္ဟုဆိုပါသည္ ။
( မႈိကြန္ခ်ာ ဟာ စား၍ လုံးဝမရေသာ မႈိပါ မိုးဦးကာလမွာ ေနရာေဒသ အေတာမ်ားမ်ားေပါက္ပါတယ္ ပုံပါအတိုင္းမႈိပါ ရင့္သြားလို ရွိရင္ ပုတ္ေစာ္အရမ္းနံပါတယ္ ေလာက္တြယ္တဲအထိကို ပုတ္ေစာ္နံတဲ မႈိမ်ိဳးပါ )
အဲလို မရင့္မစြန႔္ခင္ အႏုကို ႏႈတ္ၿပီး အရက္ျပန္ပုလင္းႏွင့္ စိမ္းထားပါက ႏွစ္ႏွင့္ခ်ီၾကာေနေတာင္မွ အာနိသင္ မပ်က္ဘူးဟု ဆိုပါသည္ ။ ဒုတၳာ အမႈန႔္ မပါဘဲနဲ႔အရက္ျပန္နဲ႔ စိမ္းထားၿပီးအရည္ကို ေသြးစူနာ၊အနာစိမ္း၊ အနာပဆုတ္ ယားနာ၊ ေပြးနင္းကူး စသည့္ အေရျပား အနာမ်ိဳးစုံကိုလည္ ေပ်ာက္ကင္းေၾကာင္း ဆိုပါသည္ ။ ေတာနယ္ဘက္ေတြမွာ ထိုကဲသို ေဆးနည္းေလးက အင္မတန္ အသုံးဝင္ႏိုင္ပါသည္ ။
ထို႔ေၾကာင့္ က်ေနာ္ သိသေလာက္ မွ်ေဝ လိုက္ပါရေစ မိတ္ေဆြမ်ားကို
Credit@က်ိဳက္ထို ေ႐ႊၿမိဳ႕ေတာ္ သတင္းစဥ္
ဒညင်းသီး ကြိုက်သူများအတွက် စားပြီးပြီးချင်း အဆိပ်ဖြေပါ…..
အချိုရည်နှင့် ကော်ဖီမစ် အမှုစစ်ရဲများ ကွာရန်တင်း ဝင်နေရ၊အတုလုပ်သူတွင် ကိုဗစ် ပိုးတွေ့…
ကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးတွေ မြန်မာပြည်အနှံ့ ပို့ဖို့ လေကြောင်းလိုင်းတွေ ပြင်ဆင်နေပြီ ဆိုတဲ့ လေယာဉ်မှူးကြီး ဦးအောင်ပို..
ကိုဗစ်ဆေးတွေ ရောက်တော့မယ်ဆိုတော့ မြန်မာပြည်တစ်နံတစ်လျားကို ဖြန့်ဖြူးပေးနိုင်ဖို့ လေယာဥ်တွေကို အသုံးပြုရမှာမို့ လေကြောင်းလိုင်းတွေ စတင်ပြင်ဆင်ရပါပြီ Vaccine တွေဟာ အပူချိန် (- ၈)ဒီကရီမှ (-၇၀)ဒီကရီအတွင်းမှာ ထိန်းသိမ်းထားရတာကြောင့် ရေခဲခြောက်တွေကို…
ကားအက်စီးဒန့်ကြောင့် နဖူးမှာ နှာခေါင်းပေါက်သွားရတဲ့အမျိုးသား(ရုပ်သံ) ….
အောက်ဆုံးတွင်videoပါသည်…… တရုတ်နိုင်ငံကအမျိုးသားတစ်ဦးကတော့ ကားမတော်တဆမှုပြင်းထန်စွာဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ သူဟာ ကံကောင်းစွာနဲ့အသက် မသေခဲ့ပေမယ့် နှာခေါင်းတစ်ခုလုံးစုတ်ပြတ်သတ်သွားခဲ့ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဆရာဝန်တွေက နဖူးပေါ်မှာ နှာခေါင်းတစ်ခုဖန်တီးပေးလိုက်တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ Credit ; Myanma Platform…
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး တောင်ဥက္ကလာပမြို့နယ် ၊ ၁၁ရပ်ကွက် ၊မေတ္တာလမ်း ရေကန်ဘေးဇာနည်လမ်းထိပ်ညောင်ပင်အောက် ဆုတောင်းပြည့်စေတီတော် မှာရှိတဲ့ ဘုရားဆင်းထုတော်ငယ်လေးထူးဆန်းစွာ မျက်လုံးတော် တစ်ဖက် ပွင့်နေတဲ့ ဗီဒီယို လေးပါ။ ၇ ရက်သားသမီးများ…